Faallo.com Maxaa Helay? - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Faallo.com Maxaa Helay?
Published on Thursday, 25 July 2013 13:54	Xogta Shacabka (Jigjiga) Website-kii Faallo ee ka warami jiray arrimaha Dagaanka Soomaalida ayaan waxba lagu soo qorin muddo bil ah, waxaana daba gal aan ku samaynay sababta ugu wacan an ku ogaannay in maamulka Kililku ay gacanta ku dhigeen mulkiilihii iyo qoraagii Faallo.com. Wararka la isla dhex marayo magaalada Jigjiga ayaa ku waramaya in Faallo.com an waxba lagu soo qorin tan iyo intii jeelka loo taxaabay Maxamed Aadan Dalab.
Faallo.com oo sannad iyo badhkii ina dhaafay ka warami jirtay Dagaanka Soomaalida, gaar ahaan arrimaha N/galyada, Liyuu Booliska iyo maxaabiista iyo dhibaatooyin badan oo ay ka sheegi jireen Cabdi Iley, ayaa bilihii u danbeeyay laga xidhay hawada wadanka Ethiopia.
Masuul sare oo Kililka ka tirsan nagana codsaday inaan magiciisa qarino ayaa noo sheegay in Faallo lagu soo qori jiray xogo aad xasaasi u ah iyo sirta xukuumada uuna ka shaki qabo inay xidhiidh la lahaayeen madax sare oo xukuumada kililka kamid ah gaar ahaan Security Council-ka oo shirarkooda iyo waxa ay kawada hadlaan markaba la soo galin jiray Faallo.com.
Maxamed Adan Dalab ayaa ahaa siyaasi ruug cadaa ah horayna uga soo shaqayn jiray dawlada. Qaar kamid ah madaxda DDS ayaa xidhiidh hoose la lahaa Maxamed Aadan iyagoo sida la sheegay aaminsanaa inuu layn uga soo xidho dawlada Federaalka kalana tashan jiray siday shabakado siyaasadeed u samayan lahaayeen. Hada ka hor Maxamed Adan ayaa mudoo laga joogo todoba sanadood laga soo qabtay xadka Ethiopia iyo Kenya dagmada Mooyaale isagoo damacsanaa inuu la baxsado lacag Xafiiska Biyaha kililku lahaa oo markaasi uu xisaabiye ka ahaa.
Faallo.com ayaa waqtiyadii u danbaysey ka hadlaysey arrimaha beesha Jidwaaq iyo wax ay ugu yeedheen dhul-boob ka jira magaalada Jigjiga.
Copyright © 2013 Xogtashacabka.com. All Rights Reserved.